Rute naNaomi | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
Pakaitika nzara munyika yeIsraeri, mumwe mukadzi wechiIsraeri ainzi Naomi akatama ndokunogara kuMoabhi pamwe chete nemurume wake nevanakomana vavo vaviri. Kwapera nguva yakati, murume waNaomi akafa. Vanakomana vake vakaroora vakadzi vechiMoabhi vainzi Rute naOpa. Chinorwadza ndechekuti vanakomana vaNaomi vakazofawo.
Naomi paakanzwa kuti nzara yakanga yapera kuIsraeri, akasarudza kudzokera kumusha. Rute naOpa vakaendawo naye, asi pavakanga vari munzira, Naomi akavaudza kuti: ‘Maiva vakadzi vakanaka kuvanakomana vangu uye varoora vakanaka kwandiri. Ndinoda kuti mese muzoroorwa zvakare. Dzokerai kumba kuMoabhi.’ Vakadzi vacho vakati: ‘Tinokudai! Hatidi kukusiyai.’ Naomi akaramba achivaudza kuti vaende. Pakupedzisira, Opa akadzokera, asi Rute haana. Naomi akamuudza kuti: ‘Opa ari kudzokera kuvanhu venyu navanamwari venyu. Dzokerawo naye.’ Asi Rute akati: ‘Handisi kuzokusiyai. Vanhu venyu vachavawo vanhu vangu, uye Mwari wenyu achavawo Mwari wangu.’ Unofunga kuti Naomi akanzwa sei Rute paakataura izvozvo?
Rute naNaomi vakasvika muIsraeri panguva yaitanga kukohwewa bhari. Rimwe zuva, Rute akaenda kunonhonga zvaisaririra pakukohwa mumunda memumwe murume ainzi Bhoazi, uyo aiva mwanakomana waRakabhi. Bhoazi akanzwa kuti Rute muMoabhi ainge aratidza kuvimbika nekugara naNaomi. Saka akaudza vashandi vake kuti vasakohwe vachipedza zvese mumunda kuitira kuti Rute awane zvekuunganidza.
Ava manheru, Naomi akabvunza Rute kuti: ‘Washanda mumunda maani nhasi?’ Rute akati: ‘Mumunda memurume anonzi Bhoazi.’ Naomi akati: ‘Bhoazi ndemumwe wehama dzemurume wangu. Ramba uchishanda mumunda make pamwe chete nevamwe vakadzi vechidiki. Unenge wakachengeteka ikoko.’
Rute akaramba achishanda mumunda maBhoazi kusvikira nguva yekukohwa yapera. Bhoazi akaona kuti Rute aishanda nesimba uye aiva mukadzi aiita zvakanaka chaizvo. Mumazuva iwayo, zvainzi kana murume akafa asina vana vakomana, hama yake yaigona kuroora mudzimai wacho. Saka Bhoazi akaroora Rute. Vakava nemwanakomana ainzi Obhedhi, uyo akazova sekuru vaMambo Dhavhidhi. Shamwari dzaNaomi dzakafara chaizvo. Dzakati: ‘Pakutanga, Jehovha akakupa Rute, uyo ave achikuitira zvakanaka chaizvo, apa iye zvino wava nemuzukuru. Jehovha ngaakudzwe.’
“Kune shamwari iri pedyo kupfuura mukoma.”​—Zvirevo 18:24
Mibvunzo: Rute akaratidza sei kuti aida Naomi? Jehovha akachengeta sei Rute naNaomi?
Rute—“Mukadzi Akanaka Kwazvo”
Nei wanano yaRute naBhoazi ichikosha? Tingadzidzei kuna Rute naNaomi nezvemhuri?
Nei Rute ainge akagadzirira kusiya hama dzake nenyika yake? Unhu hupi hwaakaratidza hwakaita kuti adiwe naJehovha?
Rute Kadhi reBhaibheri
Rute akabvirei kumusha kwavo? Prinda kadhi iri reBhaibheri uye tsvaka mhinduro yacho.
Kadhi reBhaibheri raNaomi
Murume wake nevanakomana vake vaviri vafa, Naomi akaudza shamwari dzake kuti dzimudaidze nerimwe zita.
Shamwari yaNaomi Yakavimbika
Nyaya iyi inobatsira vana vane makore ari pakati pe3 ne6 kuti vadzidze nezvaRute naNaomi.
Tevedzera Unhu Hwakanaka Hwaiva naRute
Nyaya iyi inobatsira vana vane makore ari pakati pe6 ne8 kuti vangava sei shamwari dzakanaka.
Unhu Hunoratidzwa Neshamwari Yakanaka
Nyaya iyi inobatsira vana vane makore ari pakati pe8 ne12 kuti vave neunhu hwakanaka.